Fikarohana momba ny firaisana Vistas of Infinity: Ny zavatra niainan'i Jurgen Ziewe momba ny lanitra, ny helo ary ny tontolon'i Lucid - Fikarohana Reincarnation
Vistas ny Infinity: Jürgen Ziewe ny zavatra niainan'i an-danitra, Hell sy nahiratra ny sainy, Ecstacy
Ao amin'ny bokiko Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, dia nohazavaina fa misy ambaratonga maro ao amin'ny tontolon'ny fanahy ary aorian'ny fahafatesana, dia misy fiantraikany amin'ny lafiny ara-panahy izay mifanaraka amin'ny fivoarantsika ara-panahy. Ambany ambany dia toerana ratsy ateraky ny mpanao heloka bevava mahery setra, izay manohy manandrana mamitaka sy mifamono. Mihamitombo sy mahafinaritra kokoa ny haavom-bitsy.
Ireo fitsaboana roa, Echo Bodine sy Judy Goodman, dia nanampy tamin'ny Fiandohan'ny fanahy, amin'ny fizarana ny traikefan'izy ireo amin'ny fandehanana any amin'ny ambaran'ny tontolo ara-panahy. Ny mpitarika fanahy Ahtun Re, izay nampitain'ny media tranainy Kevin Ryerson, dia milaza fa misy izy eo amin'ny fiaramanidina akaiky indrindra an'Andriamanitra ary manoritsoritra ny toetrany ho "Lucid Ecstasy." Fiandohan'ny fanahy dia mifototra amin'ny resaka ataoko amin'i Ahtun Re. Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho hatramin'ny 2001.
Ny boky iray izay vao haiko no mahatonga ny fiainana ara-panahy ho velona tanteraka dia manana zo Vistas of Infinity. Ny mpanoratra, Jurgen Ziewe, dia nomena fahafahana hampiasa ny zava-niainan'ny vatana mba hijerena ireo sehatra ara-panahy. Jirgner dia mpanoratra tena tsara ary ny sarin'ny sehatra maro ao amin'ny tontolon'ny fanahy dia mandevona.
Ny tanjon'ny fifanandrinana eo amin'i Jurgen sy Ahtun Re dia ny tsy maintsy iainantsika ny zavatra nataontsika tamin'ny hafa avy amin'ny fomba fijerin'ny hafa. Amin'izay dia hijinja izay afafintsika isika.
Isika rehetra dia tsy maintsy miatrika ny fahafatesana indray andro any ary fahendrena ny miomana amin'izany. Ny fahitana ny mandrakizay dia boky torolalana mahafinaritra ho an'ny zavatra andrasana. Pejy manaraka dia omena eto ambany:
Ny traikefa sy ny fizotry ny fahafatesana
Nai Leng niaina tamim-pahatsorana ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray